Kalluumeysatada Lacagta Lacagta Laheysta - Cuntada AASraw
/ Products / Budada Loss Fat
Waxaan nahay Badeeco Badeeco Burburin ah, Badeeco Burbur Burburin ah oo iib ah, Sida aan u ballan qaadnay, dhamaan budada Nadiifinta Dufanka waxay ku jirtaa nadiif aan ka yarayn 98%.
Xabbad Khafiif ah
Waxaa jira miisaan kala duwan oo badan oo kala duwan.
Tan waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee kaniiniyada, daroogooyinka iyo dabeecadaha dabiiciga ah.
Kuwaas waxaa lagu sheegaa inay kaa caawiyaan inaad lumiso miisaanka, ama ugu yaraan fududeeyso in aad lumiso miisaanka oo ay weheliso habab kale.
Waxay u muuqdaan inay ka shaqeeyaan mid ama in ka badan oo ka mid ah farsamooyinkaas:
Iska yaree rabitaanka cuntada, taasoo kaa dhigeysa inaad dareentid wax aad u badan si aad uhesho kalooriyeyaasha yar
Yaree nuugista nafaqooyinka sida dufanka, taasoo kaa dhigeysa in aad qaadato kalooriyeyaasha yar
Kordhi baruurta gubashada, oo kaa dhigaysa in aad gubato kalooriyo badan
Daawooyinka ma bedeli karaan dhaqdhaqaaqa jireed iyo caadooyinka cunitaanka caafimaadka qaba sida miisaan lumis ah?
Daawooyinka ma beddeli karaan dhaqdhaqaaqa jirka ama caadooyinka cunitaanka caafimaadka leh sida miisaan lumis ah. Daraasaduhu waxay muujinayaan in dawooyinka miisaan-luminta ay si fiican u shaqeeyaan marka lala barbar dhigo barnaamijka qaab nololeedka. Weydii dhakhtarkaaga ama xirfadlaha kale ee daryeelka caafimaadka barnaamijyada daaweynta hab nololeedka maaraynta miisaanka oo kuu shaqeyn doona.
Waa maxay faa'iidooyinka isticmaalka daawooyinka laguu qoray si aad miisaanka u dhinto?
Marka lagu daro isbedelka dabeecadda, oo ay ku jiraan cunidda iyo dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa jireed, daawooyinka dhakhtar qoro ayaa laga yaabaa inay caawiyaan qaar ka mid ah dadka lumiyo miisaanka Celcelis ahaan, dadka qaata dawooyinka rijeetada oo qayb ka ah barnaamijka qaab nololeedka ayaa lumiya inta u dhaxaysa 3 iyo 9 boqolkiiba miisaankooda bilowga ah marka loo eego dadka ku jira barnaamijka hab nololeed ee aan qaadan daawada. Cilmi-baaris ayaa muujisay in dadka qaarkood qaata daawooyinka miisaan-lumis la'aanta ah ay lumiyaan boqolkiiba 10 ama in ka badan miisaankooda bilowga ah. 1 Natiijooyinka waxay ku kala duwan yihiin daawo iyo qof.
Miisaanka culus ee 5 ilaa 10 boqolkiiba miisaankaaga bilawga ah ayaa kaa caawin kara hagaajinta caafimaadkaaga adigoo hoos u dhigaya sonkorta dhiigga, cadaadiska dhiigga, iyo triglycerides. Miisaanka luminta sidoo kale waxay hagaajin kartaa dhibaatooyinka kale ee caafimaad ee la xariira culeyska iyo cayilka, sida xanuunka wadajirka ama hurdada hurdada. Miisaanka luminta intiisa badan waxay dhacdaa bilaha ugu horreeya ee 6 bilawga daawada.
Waa tan waxa ay tahay inaad ka ogaato daawooyinka ugu badan ee miisaanka laguu qoro: Orlistat powder, Bitter Orange / Synephrine powder, Sibutramine powder, Clenbuterol HCL powder, Phentermine powder, and Lorcaserin HCL powder, Cetilistat powder.
1. Dufanka Orlistat
Budada Orlistat waa daawada dawada, oo iibinaysa bakhaarka oo ku hoos qoran magaca Alli, iyo rijeetada daawada Xenical. Dufanka Orlistat, oo sidoo kale loo yaqaan Alli or Xenical, wuxuu yareeyn karaa xaddiga dufanka aad ka soo jiidatid cuntada oo kaa caawinaya inaad lumiso miisaanka. Waxay leedahay waxyeelo badan, qaar ka mid ah kuwani waa kuwo aad u xun.
Si xiiso leh, cunto yar oo yar (oo aan daawo lahayn) ayaa lagu muujiyay inuu yahay mid waxtarka leh labada budo ama liqid labadaba.
2. Dufanka Orange / Synephrine
Nooca oraniska ah ee lagu magacaabo orange bitter ayaa ku jira budada synephrine. Daawada budada ee 'emphrine' ayaa waxay la xiriirtaa eefedrine, taas oo loo isticmaali jiray qayb caan ah oo ah maaddooyinka kiniinka ee miisaanka kala duwan.
Daawada budada ah ee loo yaqaan 'emphrine' waa mid aad u kacsan, waxaana dhici karta in miisaankiisu hoos u dhaco muddada gaaban. Si kastaba ha noqotee, waxyeellada daawadu waxay noqon kartaa mid halis ah, sidaas awgeed waa in loo isticmaalaa oo keliya taxaddar aad u ba'an.
3. Budada Sibutramine
Kiniiniga Sibutramine wuxuu saameeyaa kiimikada maskaxda ee saameeya hagaajinta miisaanka. Budada Sibutramine waxaa loo isticmaalaa cunto iyo jimicsi si loo daaweeyo cayilka oo laga yaabo inuu la xiriiro sonkorowga, kolestaroolka sare, ama dhiig kar.
Kiniiniga Sibutramine waa la qaadan karaa ama aan lahayn cunto. Waa inaad lumisaa ugu yaraan xaddiga 4 inta lagu jiro usbuucyada ugu horreeya ee 4 ee qaadashada daawada sibutramine iyo cunidda cunto kalooriye yar. U sheeg dhakhtarkaaga haddii aadan lumin ugu yaraan ugu yaraan xaddiga 4 ka dib qaadashada daawada toddobaadka toddobaad.
4. Xashiishka HCL Clenbuterol
Budada Clenbutrol HCL waa kaabe isku dayaya inuu ku daydo ficilka dufanka gubanaya iyo miisaanka luminta ee budada Clenbuterol HCL. Natiijooyinka budada Clenbuterol ee HCL waa kuwo cajiib ah waxaana taageeray koox caan ah iyo ciyaartoy, oo ay ku jiraan Jessica Hardy iyo Victoria Beckham. Waxay ku gubeysaa baruurta “kordhinta xaddiga dufanka jirku ku shaqeynayo iyadoo la kordhinayo heerka dheef-shiid kiimikaadka asalka ah” - si kale haddii loo dhigo, waa daroogada miisaanka lumisa oo fiican
Si aad u iibsato miisaan culus / cunno daroogo ah oo loo isticmaalo daawo budo ah ayaa si aad ah looga taxaddaraa, gaar ahaan alaabada internetka ee caalamka. Waxaa jira laba ilo oo badan oo sheeganaya in ay bixiyaan alaabooyinka la yiraahdo laakin waxaa loo cadeeyay in ay yihiin kuwo been abuur ah. AASraw waxay bixisaa oo kaliya oo bixisaa alaabad dahsoon.